एजेन्सी, हामी बाँच्ने सरदर उमेर हो ७० बर्ष । यत्तिका उमेरसम्म हामी कति तन्दुरस्त रहन्छौ ? कति निरोगी रहन्छौ ? कित उर्जावान रहन्छौ ? कति सिर्जनसिल रहन्छौ ? कति गतिशिल रहन्छौ । एकैछिन उमेरको हिसाब-किताब गरौ
काठमाण्डौ, नेपाली सेनाका लेफ्टीनेन्ट कर्नेल केशवराज कार्की बर्खास्तीमा परेका छन् । सेनाको समरी सैनिक अदालतले भ्रष्टाचारमा कसुर ठहर भएका कर्नेल कार्कीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेसँगै जेल चलान गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना अन्तर्गतको पचास लाख
काठमाण्डौ, शनिबार बिहान रामेछापको गुम्देलमा ४ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बिहान ११ बजेर २ मिनेटमा रामेछापको गुम्देलमा ४ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको हो । यसअघि
एजेन्सी, आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अघि शुक्रवार राति खेलिएको अभ्यास खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई तीन विकेटले हराएको छ । ब्रिस्टोलमा भएको खेलमा पाकिस्तानले दिएको दुई सय ६३ रनको विजयी लक्ष्य अफगानिस्तानले ४९.४ ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा पूरा
अछाम, अछाममा आगलागी हुँदा ७ घर जलेर नष्ट भएका छन् । शुक्रबार बेलुका गहुँगडामा नल पोल्नका लागी बालिएको आगो हावाले उडाएपछि जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका– ४ बलातामा आगलागी भएको र सो क्रममा ७ घर जलेर नष्ट भएका
काठमाण्डौ, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको शुक्रबार १० महिना पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । चार सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले कुनै संकेत फेला पार्न
कोहलपुरको विच वजारमै भयानक दुर्घटनामा, एक जनाको मूत्यु : एक गम्भिर घाईते
कोहलपुर, बाँकेको कोहलपुरमा भयानक सवारी दुर्घटना भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको विच वजारमा रहेको प्रमुख चोक मध्येको एक साझा चोकमा विहीबार भएको सवारी दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु भएको हाे । भने एक गम्भिर घाइते भएका
संयुक्त प्रतिपक्ष विद्यार्थी संगठन कास्कीले गर्याे यस्तो निर्णय
कास्की, कास्की जिल्लाका विभिन्न तिन अोटा प्रतिपक्ष विद्यार्थी संगठनहरुको वैठक सम्पन्न भएको छ । वैठकले एक विज्ञप्ती जारी गरी वर्तमान शैक्षिक र राजनितीक विषयहरु माथीको आफ्नो महत्वपूर्ण धारणाहरु सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लामा क्रियासिल तिन अोटा
प्रहरीको गोली लागी विप्लब नेकपाका कार्यकर्ताको मृत्यु
काठमाण्डौ, भोजपुरमा विप्लब नेतूत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको छ । मंगलवार दिउँसो भोजपुर र खोटाङ्गको सिमानामा पर्ने मैयुम क्षेत्रको धोत्रे भन्ने ठाउँमा प्रह्रीले उनीमाथि गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली प्रहारबाट
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य असल खड्का रिहा लगत्तै पुनः गिरफ्तार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र बहादुर खड्का ‘असल’ मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै प्रहरीले पुन: गिरफ्तार गरेको छ । चन्द्र बहादुर खड्का ‘असल’लाई वैशाख ७ गते दाङको तुल्सिपुरबाट गिरफ्तार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको